FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA CRESTEPOO SINOA - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika crestepoo sinoa
Alika mitetika / Poodle mifangaro alika
'Coco the Poochis dia 1 taona amin'ity sary ity. Izy dia fitambarana tonga lafatra amin'ny tena manan-tsaina ary tena maniry ny hampifaly, mahatonga azy ho tonga mpianatra haingana ary mora zatra. Fantany daholo ny baiko fototra sy ny tetika am-polony eo ho eo sahady. Silky sy malefaka ny palitaony miaraka aminy ary mora mikorapaka sy mametaka. Mila fikolokoloana isan'andro miaraka amina vy vita amin'ny vy, fa ny habeny sy ny toetrany mora miova no mahatonga azy ho asa mora. Sariaka amin'ny olon-drehetra izy, mahafinaritra ny ankizy, tia milalao nefa mandry fahizay, manodidina ny faritra lavorary! '
Ny alika Crestepoo dia tsy alika madio. Lakroa misy eo anelanelan'ny Sinoa voadona ary ny Poodle . Ny fomba tsara indrindra hamaritana ny toetran'ny karazany mifangaro dia ny mijery ireo karazana rehetra ao amin'ny hazo fijaliana ary fantaro fa afaka mahazo mitambatra amin'ny iray amin'ireo toetra hita ao amin'ny karazany roa ianao. Tsy ireo alika hybrid mpamorona rehetra ireo no noompiana fa 50% purebred ka hatramin'ny 50% purebred. Tena mahazatra ny mpiompy ny miompy lakroa misy taranaka maro .
Mpanoratra International Canine Registry®= Crestepoo sinoa (Poochis)
Registra momba ny endrika mpamorona = Poochis
Ambrose ilay apricot Crestepoo lahy amin'ny 15 herinandro sy 14 pounds - hoy ny tompony, 'Hitako fa ny Crestepoo dia karazana marani-tsaina sy be fitiavana. Manana vehivavy Miniature Schnauzer izahay izay zandriny roa tapa-bolana aminy ary izy roa ireo dia tsy misaraka indraindray. '
Crestepoo Sinoa (alika voaangona / fenitra Poodle mix dog) - 'Vixen, iza no mahafatifaty indrindra amin'ireo 3 ary be volo indrindra, dia zazavavy tena feno fanahy fanahy izay mora mangatsiaka ary TIA mikorontana.'
Suki the Crestepoo (alika mpiompy sinoa voarohirohy / Poodle mifangaro) amin'ny 6 volana
Alika mena sy mainty ary alika mainty Crestepoo sinoa mainty sy mainty
Alika kely Crestepoo sinoa
Ambrose ilay apricot Crestepoo lahy amin'ny 10 herinandro sy 10 pounds
Crestepoos sinoa (alika hybrid sinoa voajono / Poodle) - 'Manana 3 aho Sinoa voadona / Poodle mahazatra mifangaro izay mpiray tam-po aminy ary nahagaga. Vixen, Veela ary Vernon no anaran'izy ireo. Nisy pups 5 daholo, na dia telo monja aza no noraisinay. Samy hafa avokoa izy telo mianadahy - habe samy hafa, volon'ny volony isan-karazany, na ny endrika vatana aza samy hafa, fa izy telo kosa dia misy zavatra itovizany. Tena be fitiavana sy hendry izy ireo. '
Crestepoos sinoa (alika mpiompy sinoa moka / mahazatra Poodle mix dogs) - 'Vixen nandry tamin'i Vernon rahalahiny. Alika kely 4 volana izy ireo ao amin'ny sary. '
Jereo ohatra misimisy kokoa momba ny Crestepoo sinoa
Sary Crestepoo Sinoa
Olde anglisy bulldogge anglisy bulldog Mix
sarin'ny alika eskimo amerikana
fampifangaroana laboratoara bullmastiff amidy
inona no amboa cur black vava
alika kely kemmer cur amidy
pomeranian jack russell mix puppy
mpanao ady totohondry taloha bulldog anglisy Mix